Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato "meeraha" Pluto | Saadaasha Shabakadda
Pluto, meeraha la illaaway ee aan meeraha sii ahayn. Inaga Nidaamka qoraxda waxaa jiray sagaal meerayaal kahor ilaa wixii ahaa ama aan ahayn meeraha dib loo qeexaayey Plutona waxay ahayd inay ka soo baxdo isku darka meerayaasha. Ka dib markii 75 sano ay ku jirtay qaybta meeraha, 2006 waxaa loo tixgeliyey Meere Caan ah. Si kastaba ha noqotee, muhiimadda meerahani waa mid aad u weyn, maaddaama meydadka samaawiga ah ee ku dhex wareegaya meeraheeda loo yaqaan 'Plutoid'.
Qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa dhamaan sirta iyo astaamaha meeraha cufan pluto. Ma rabtaa inaad wax badan ka ogaato? Akhriso si aad waxbadan ubarato.
1 Astaamaha Pluto
2 Macluumaad ku saabsan meeraha cowska
4 Wareegga Pluto
Meerahan ciriiriga ah waxay ku wareegaan Qorraxda 247,7-kii sano oo kasta oo sidaas ayuu sameeyaa isagoo ku socdaalaya celcelis ahaan masaafad dhan 5.900 bilyan oo kilomitir. Cufnaanta Pluto waxay u dhigantaa 0,0021 jeer dhulka ama shan meelood hal meel cufka dayaxdeenna. Tani waxay aad uga yartahay in loo tixgeliyo meeraha.
Waa run in muddo 75 sano ah ay ahayd meeraha Ururka Caalamiga ah ee Cirka. Sannadkii 1930-kii ayaa loogu magacdaray ilaahkii Roomaanka ee hoosta.
Mahadsanid daahfurka meerahan, daahfurka weyn ee xigay sida Kuiper Belt ayaa la sameeyay. Waxaa loo arkaa inay tahay meeraha ugu weyn dunida iyo gadaashiisa Eris. Waxay ka kooban tahay inta badan noocyada barafka qaarkood. Waxaan helnaa baraf ka samaysan methane la qaboojiyey, mid kale oo biyo ah, iyo mid kale oo dhagax ah.
Macluumaadka ku saabsan Pluto aad ayuu u xaddidnaa tan iyo teknolojiyadda illaa iyo 1930-kii oo aan aad u horumarsanayn si loo helo daah-fur weyn oo ah jidh ilaa hadda ka fog Dhulka. Ilaa waqtigaas waxay ahayd meeraha kaliya ee aan soo booqan dayax gacmeed.
Bishii Luulyo 2015, mahadsanid howl cusub oo hawada sare ka baxday dhulkeenna 2006, waxay awood u yeelatay inay gaarto meeraha cowska, iyadoo heshay macluumaad fara badan. Xogtu waxay qaadatay muddo sanad ah si ay u gaarto meeraheenna.
Macluumaad ku saabsan meeraha cowska
Mahadsanid kororka iyo horumarka tikniyoolajiyadda, natiijooyin waaweyn iyo macluumaad ku saabsan Pluto ayaa la helayaa. Wareegeedu waa mid aad u gaar ah marka loo eego xiriirkiisa meertada ah ee dayax gacmeedkiisa, dhidibka wareegga, iyo kala duwanaanshaha xaddiga iftiinka soo gaaraya. Dhamaan doorsoomayaashaani waxay ka dhigayaan meerahan cirka ah soo jiidasho weyn bulshada sayniska.
Waana inay ka sii fog tahay Qorraxda meeraha kale ee ka kooban nidaamka qorraxda. Si kastaba ha noqotee, sababtoo ah qaab dhismeedka wareegga, waxay ka dhowdahay Neptune muddo 20 sano ah oo ku wareegsan. Bishii Janaayo 1979 Pluto wuxuu dhex maray wareegga Neptune wuxuuna kusii dhawaaday Qorraxda illaa iyo Maarso 1999. Dhacdadani mar dambe ma dhici doonto illaa Sebtember 2226. In kasta oo ay xaqiiqda tahay in meeraha kale uu galayo meeraha kale, haddana suurtagal ma ahan in shil dhaco. Tani waa sababta oo ah wareegga 17,2 darajo marka la eego diyaaradda ecliptic. Tan awgeed, dariiqa wareegga waxaa loola jeedaa in meerayaasha aan waligood la helin.
Pluto wuxuu leeyahay shan dayax. In kasta oo ay aad u yar tahay marka la barbar dhigo meeraheenna, haddana 4 dayax ayaa naga badan. Dayaxa ugu weyn waxaa lagu magacaabaa Charon waana qiyaastii kala bar cabirka Pluto.
Jawiga Pluto waa 98% nitrogen, methane iyo raadadka qaar kaarboon monoksaydh. Gaasaskani waxay xoogaa cadaadis ah saaraan dusha meeraha. Si kastaba ha noqotee, waxay ku saabsan tahay 100.000 daciif marka loo eego cadaadiska dhulka ee heerka badda.
Matoonka adag ayaa sidoo kale la helaa, sidaa darteed waxaa lagu qiyaasaa in heer kulka meerahan cowska ahi yahey waxay ka hooseeyaan 70 darajo Kelvin. Sababtoo ah nooca gaarka ah ee wareega, heerkulku wuxuu leeyahay kala duwanaansho aad u ballaaran oo kala duwan oo dhan. Pluto wuxuu u dhowaan karaa Qorraxda illaa 30 Unugyada Xiddigiska wuxuuna u dhaqaaqi karaa illaa 50. Markay ka sii fogaato Qorraxda, jawi dhuuban ayaa ka muuqda meeraha kaasoo barafoobay kuna dhacaya dusha sare.
Si ka duwan meerayaasha kale sida Saturn y Jupiter, Pluto waa mid aad u dhagax badan marka loo eego meerayaasha kale. Ka dib daraasadaha la sameeyay, waxaa la soo gabagabeeyay in, heerkulka hooseeya awgood, inta badan dhagaxyada ku yaal meerahan cowsku ay ku dhex jiraan baraf. Baraf asal ahaan kala duwan sidaan horay u soo aragnay. Qaar waxay ku qasan yihiin methane, qaarna biyo, iwm.
Tan waxaa loo tixgelin karaa iyadoo la siinayo nooca isku-darka kiimikada ee ku dhaca heerkulka iyo cadaadiska hooseeya inta lagu jiro sameynta meeraha. Saynisyahanada qaar ayaa leh aragtida ah in Pluto runti uu yahay dayax gacmeed lumiyay Neptune. Sababta oo ah waxaa macquul ah in meerahan cirka ah lagu tuuray meeris kale oo ka duwan intii lagu jiray samaynta Nidaamka Qoraxdu. Sidaa darteed, Charon waxaa loo sameyn doonaa natiijada ka dhalatay isku soo ururinta qalabka fudud ee ka dhashay isku dhaca.
Pluto waxay qaadataa 6384 maalmood inay iskaga wareegto. maaddaama ay sidaas ku sameyso qaab isku-dhafan oo ku wareegsan wareegga dayax-gacmeedkeeda. Sababtaas awgeed, Pluto iyo Charon had iyo jeer waa isku weji midba midka kale. Wareegga meertada ee dunidu waa 23 darajo. Dhinaca kale, tan Planetoid-ka waa 122 digrii. Ulaha waxay ku dhow yihiin diyaaraddooda wareega.
Markii ugu horaysay ee la ogaaday, dhalaalka ka soo baxa tiirkiisa koonfureed ayaa la arkay. Markii aragtideena Pluto la beddelay, meeraha wuxuu umuuqday inuu yaraaday. Waqtigan xaadirka ah waxaan arki karnaa dhulbaraha planetoid-ka Dunida.
Intii u dhaxeysay 1985 iyo 1990, dhulkeenna waxaa lala jaanqaaday wareegga Charon. Sababtaas awgeed, Dayax madoobaad mid kasta oo ka mid ah maalmaha Pluto waa la arki karaa. Waad ku mahadsan tahay xaqiiqadan, macluumaad badan oo ku saabsan albedo ee meeraha cows ayaa la ururin karaa. Waxaan xasuusnaa in albedo ay tahay waxa qeexaya milicsiga meeraha shucaaca qoraxda.
Waxaan rajeynayaa in xogtaan aad sifiican ugu ogaan karto meeraha yare ee Pluto iyo xiisaha ay u leedahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Astronomy » The "meeraha" Pluto
Waadna mahadsan tahay, waxay iga caawisay inaan shaqo weyn qabto !!
Jawaab ku sii Daniela Morales Hernández